Digimind: Yemagariro Media Ongororo yeiyo Bhizinesi | Martech Zone
Digimind iri kutungamira SaaS yemagariro midhiya yekutarisa uye yemakwikwi kambani yehungwaru inoshandiswa nemakambani emabhizinesi uye vamiririri vanoshanda navo. Iyo kambani inopa akawanda mhinduro:
Digimind Yemagariro - yekunzwisisa vateereri vako, kuyera yako yekushambadzira ROI, uye kuongorora mukurumbira wako.
Digimind Njere - inopa kukwikwidza uye indasitiri yekutarisa kuti iwe ugone kutarisira kushandurwa kwemusika uye kuona mikana yebhizinesi.
Yemagariro Command Center - chaiyo-nguva yekuratidzira nzvimbo yekuratidzira chiratidzo chako chemagariro.
Uine Digimind Yemagariro, unogona kuongorora, kuongorora, kuita, kurondedzera, kuyera ROI, uye kugadzirisa mukurumbira wako online.
Digimind yakasarudzika mukuti ivo vakabatana navo Ditto uye yakabatanidza chimiro chekucherechedza mufananidzo kune yavo turu yekushandisa, ichipa mabhenji mukana wekutarisa magariro kutaurwa angave anoonekwa pasina zvinyorwa zvataurwa!
Kufambira mberi uku kunogona kushandiswa nenzira dzinoverengeka:
Kuongorora kwekuita yekutsigira kana kudyidzana panguva yemumhanzi, mitambo kana chiitiko chetsika, pamwe nekuyera kuburitswa kwechiratidzo maererano nezvakaratidzwa zvinoonekwa zvisingataure zita racho mukunyora.
Tsvaga mutsva kukurudzira nharaunda kana vangangodaro mamishinari emahara vanotumira mifananidzo yechiratidzo asi vasingataure nezvayo-zvinyorwa.
Wana nzwisiso yakajeka ye maitiro evatengi uye manzwiro kune zvigadzirwa zvechigadzirwa uye masevhisi.
Kudzivirirwa kweBrand kurwisa kubiridzira, senge zvigadzirwa zvekunyepedzera, nokudaro kudzikisira dambudziko rinogona kuitika.
Zvemagariro Kukwikwidzana Njere
Zvemagariro paScale - Wana mukana wekuzara Twitter Firehose, Pinterest, Instagram uye ese makuru masocial network ane anopfuura mamirioni zana ezvimedu zveruzivo zvinotariswa mazuva ese.
Yepamberi Yekutarisa - Wana mukana wekubvisa maturusi, vanokambaira vehungwaru, zvinyorwa zvinodzivirirwa ne password uye newebhu isingaonekwe.
Nyora Mining - Natural Mutauro Kugadzira Tekinoroji yakavakirwa pakudzidza kwemuchina uye semantic ongororo enjini ekuzvimisikidza nekumisikidza chiitiko.
Yechokwadi-nguva Kuongorora - chaiyo nguva ongororo yezvakaitika dhata ne14 yakasarudzika ongororo injini.
Kubatana & Zvemagariro - Chengetedza mapurojekiti epasirese ezvikwata zveese saizi nekutonga kwekodzero, magariro uye maitiro ekubatira
Zvinogona kununurwa - Nhau dzemapepanhau, zvinyorwa zvakadhindwa, chenjedzo, zvinyorwa zvekutarisa, mawebhusaiti - zvese pane desktop uye nhare (kusanganisira iOS uye Android).
Sony yakasarudza Digimind yeedu enhau enhau zviitiko sezvo chishandiso chavo chakanangana nezvatinoda, zvakabatanidzwa nevatengi vane simba uye nekukurumidza kutendeuka nguva kune zvatinokumbira. Tan Khim Lynn, Sony Bhizinesi maneja
Kutanga Mahara Digimind Trial
Tags: digiminddigimind njeredigimind socialdittoditto labsbhizinesi rezvemagariro nzvimbo yekurairabhizinesi rezvenhaukubvuma mufananidzochaiyo-nguva yemagariro midhiya analyticsyemagariro kuraira nzvimboevanhu vezvenhaumagariro enhau analyticsmagariro enhaumagariro enhauzvemagariro zvinyorwa zvemigodhizvinyorwa zvemigodhikuterera kwekuona